Iyo nyowani Apple Music playlist inonzi "Suave" | Ndinobva mac
Vhiki rapfuura, vakomana vanobva Spotify akamhan'arira zviri pamutemo neEuropean Union umo yaiti yaive muchinzvimbo chakaderera kana ichikwikwidza neApple Music, nekuti iyo yekupedzisira yakabatanidzwa muIOS uye haufanire kubhadhara inoenderana 30% kune yega kunyorera.
Apple yakakurumidza kupindura nekutaura izvo Spotify aida kushandisa sevhisi pasina kubhadhara, iyo Spotify yakapindura kuti Apple yaive kuzvibata sezvinoita zvese zvehumongi. Mushure memhinduro iyi, zvinoita sekunge Apple Haana kuda kuenderera achitamba uye haana kuita chero mutsva mhinduro.
Zvichakadaro, Apple Music inoenderera ichiita chinhu chayo uye ichangobva kuzivisa runyorwa nyowani rwunonzi Soft, iro sezita rarinotipa kune intuit, rakagadzirwa nemumhanzi muchiSpanish uye muchiPutukezi neChirungu uye kwatichawana iyo yakakosha yazvino uye yapfuura R & B inorova zvakanyanya.
Vamwe vevaimbi vanoratidzwa mune ino nyowani runyorwa vari Rosalia, Paloma Mami, Nana Mendoza, Latin Bitman… Runyorwa urwu rutsva rwave kuwanikwa kuburikidza neApple Music uye ruchadzokororwa vhiki rega-rega richiwedzera zvirimo, kunyanya Chishanu choga-choga. Kana iwe uchida kuwana yakananga iyi playlist, iwe unogona kuburikidza neiyi link. Ichi chinyorwa chekugadzira Iyo inonyorwa pakuvhurwa kwayo kwenziyo makumi mashanu
Kazhinji, ivo vakomana veApple Music vanogadzira yavo yavo yekutamba, kwatinogona kuwana muunganidzwa wenziyo dzemhando dzakasiyana dzakagadzirwa naApple. Gore rakapera rakatangwa 100 zvinyorwa zvinyorwa, kwatinogona kuwana zvinorova zvenguva mune yega ye nyika uko Apple inomhanyisa mimhanzi sevhisi inowanikwa, pamwe neyepasirese, uko kwepasirese kurova kuri nguva dzese, uye kune aya mazita zvinowedzeredzwa vhiki rega rega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo nyowani Apple Music playlist inonzi «Suave»
Nheyo yeAirPower ichavhurwa svondo rinouya
Nyowani Koogeek uye Dodocool inopa yenguva shoma